ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ” စွဲစွဲလမ်းမှု - သင်၏ Brain On Porn
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ "မုန်တိုင်း porn" စွဲပိုဆိုးလာပြီ
ကျွမ်းကျင်သူများကဗြိတိန်ကလူမုန်တိုင်း porn အနောက်ပိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျစွဲနှင့်၎င်းတို့၏အရသာ၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုသာပိုမိုအမာခံလာပြီဖြစ်ကြောင်းရှိသည်သတိပေးနေကြသည်။
"မကြာခဏဆိုသလိုလူရဲ့စွဲသူတို့တစ်တွေဂါးဒီးယန်းရုပ်ပုံပြခန်းသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုထုတ်စစ်ဆေးနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်ရှိရာအလုပ်ခွင်ထဲမှာစတင်သည်" မုန်တိုင်း-sexpert Barry Collins ကပြောပါတယ်။ "လူတိုင်းဟာမိုဃ်းကိုရွာစေနှင့် ပတ်သက်. အကောင်းတစ်ဦးပုံပြင်ချစ်သောသူဒါပေမဲ့သူတို့က၎င်း၏တစ်ဦးတံခါးပေါက်မူးယစ်ဆေးများနှင့်မကြာမီရေလွှမ်းမီးဖိုချောင်အလုံအလောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အိမ်တွေရဲ့ privacy ကိုရှိလူများသူတို့ကိုယ်သူတို့အစဉ်အဆက်ကပိုပကျြစီးခွငျးစွဲလမ်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်: ဟာရီကိန်း, မုန်တိုင်း surges, သစ်ပင်များအားဖြင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရကားများ "။
"ဒါဟာပုံမှန် porn ထက်အများကြီးပိုကောင်းမယ့်" တဦးတည်းအမည်မသိမုန်တိုင်းအသုံးပြုသူကဆိုသည်။ "ငါသည် '' ငါအရမ်းဒီခံစားမဖြစ်သင့် 'နှင့်ငါချောတယ်သောအခါအခြားသူတစ်စုံတစ်ယောက်ဟာရှုပ်ထွေး clean up လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်၏အလွန်တူညီအလုအယက်နှင့်ခံစားမှုရ။ အဲဒါကိုသူတို့ကရှေးခယျြခဲ့ဘဝရဲ့ပုံရှိလူအချို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုခံစားရမည်ကိုကြည့်ရှုကြဘူးဒါပေမဲ့ငါအရမ်းအပြစ်ရှိကြောင်းမခံစားရဘူးစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ "
တခြားသူတွေကို၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထဲကတဖြည်းဖြည်းထားပါတယ်: မြှသာ "ရေကြီးနောက်တဖန်ငါ့ကိုပယ်ရပါဘူး။ ငါပြိုကျလုတည်းတည်းတွင်ဖျက်ဆီးပစ်ဘဝတွေကိုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပို. ပို. အဆိုပါ freaky အာရှပစ္စည်းပစ္စယသို့လာပြီပေါ့။ ဆူနာမီနှင့်တိုင်ဖွန်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ဟိုမှာရိုက်ကူးရေးစောင့်ရှောက်လော့။ "
အစိုးရက nastier ဒြပ်စင်အထဲက filter လိမ့်မည်ဟုဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းအကြီးအကျယ်မုန်တိုင်းရိုးစဉ်းစားနေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး Owen Paterson အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကရှင်းပြသည်: "ကျနော်တို့ကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူအပေါင်းတို့ကိုလွန်ကဲရာသီဥတုစောင့်ကြည့်လူကြီးများနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကပြဿနာရှိပေမယ့်ကလေးတွေလည်းနုပျိုတစ်ဦးသည်အသက်မှာမုန်တိုင်းရိုက်ကူးတွေ့မြင်လျှင်သူတို့မိုးဖွဲသို့မဟုတ်မျှသာအုံ့ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုရိုးရာဗြိတိန်စကားပြောဆိုမှုနှင့်အတူကျေနပ်လိမ့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့ဟောပြောချက်စဉ်းစားရန်လိုပါတယ်။ "